Idolobha laseBanff! 2 bdrm suite 118 Beaver St. B&B - I-Airbnb
Idolobha laseBanff! 2 bdrm suite 118 Beaver St. B&B
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Lily
U-Lily Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa ku-B&B Beaver Street.
Itholakala enkabeni yedolobha elibukekayo lase-Banff. Iyindawo enobungane, enokuthula, ephephile futhi enokuthula. Ibanga lemizuzu embalwa yokuhamba ngezinyawo ukuya kuwo wonke amasevisi! Indawo emaphakathi engcono kakhulu, futhi ungashiya imoto ngemuva kwendlu!
Ifulethi elakhelwe ngaphansi elinamakamelo okulala amabili. Uma unabantu ababili kuphela, ngizokunikeza isaphulelo.
Singumndeni ohlala phezulu, futhi sinezingane ezintathu 10, 7 no-3. Izindawo ezimbili zokupaka mahhala egcekeni elingemuva! Siyabonga!
Lonke ikamelo elinamakamelo okulala amabili, nekhishi elisha negumbi lokugezela. Ikamelo lelondolo (egumbini lezinsiza) elezivakashi kuphela. Sinakho konke (enye indawo yokuwasha izingubo) phezulu. Ikamelo lokuphumula line-smart TV entsha engama-intshi angu-50.
4.92 · 87 okushiwo abanye
Ukuhamba ibanga kuzo zonke izinsiza edolobheni! Ngiyakuthanda ukuphila okulula kwedolobha, futhi uzothola le ndawo ithule, inokuthula futhi ikhululekile ngasikhathi sinye!
Ngiyakuthanda ukuhlangana nabantu. Ngiyathanda ukubingelela izivakashi. Ngihlala ngitholakala ukuthi ngihlangane, noma ngixoxe ngesigijimi nombhalo. Uma kwenzeka ngingekho ekhaya, ngizokwazisa izivakashi, futhi ngisakwazi ukutholakala ngemilayezo!
Ngiyakuthanda ukuhlangana nabantu. Ngiyathanda ukubingelela izivakashi. Ngihlala ngitholakala ukuthi ngihlangane, noma ngixoxe ngesigijimi nombhalo. Uma kwenzeka ngingekho ekhaya,…
ULily Ungumbungazi ovelele